विश्वमै नघटेको आश्चर्य चकित पार्ने घटना ! २० जना भुतसंग यौ न सम्पर्क गर्ने यी युवती, भुतकै बच्चा जन्माउने चाहना (उनिसंगको भिडियो)
अण्डा मांसाहारी कि शाकाहारी ? विज्ञानले दियो यस्तो जवाफ
एजेन्सी। केही प्रश्नहरु निकै विचित्र हुन्छन् । यो संसारमा कुखुरा पहिले आयो कि अण्डा ? यो हामीले सानैदेखि सुन्दै आएको विचित्र प्रश्न हो । यस्ता केही अनौठा प्रश्न हुन्छन् जसको जवाफ हामीलाई थाहा हुँदैन । यस्तै प्रश्न हो अण्डा शाकाहारी कि मांसाहारी ?
कैयौं शाकाहारी मानिसहरु अण्डालाई मांसाहारी सम्झेर खाँदैनन् । उनीहरुले अण्डाबाट चल्ला निस्कने हुँदा यो मांसाहारी हुने तर्क गर्छन् । तर यस्तो सोच्ने हो भने दूध पनि जनावरबाटै आउँछ । दूधलाई शाकाहारी कसरी मान्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । यस्तै अनौठा तर्कहरुका बीच बैज्ञानिकहरुले अण्डा शाकाहारी वा मांसाहारी के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।
अण्डामा मुख्यतया ३ भाग हुन्छन् । बाहिरको कडा खोल, सेतो भाग र पहेंलो भाग । तीमध्ये बाहिरको कडा बोक्रा फलिन्छ । बाँकी भएको सेतो भागमा प्रोटिनमात्र हुन्छ । बैज्ञानिकका अनुसार यसमा जनावरको कुनै भाग हुँदैन । पहेंलो भागको हकमा भने यदि अण्डा पार्नुअघि पोथीको भालेसँग सहवास भएको अवस्थामा जनावरको अंश हुन्छ अन्य अवस्थामा यसमा पनि प्रोटिन, कोलेस्टेरोल र चिल्लो पदार्थ मात्र हुन्छ ।
अहिले बजारमा पाइने अधिकांश अण्डा पोथीले भालेसँगको सहवासपछि पारेका हुँदैनन् । भालेसँग सम्पर्कबिनै पारेका अण्डाहरु शाकाहारीभित्र पर्ने वैज्ञानिकहरुले जनाएका छन् । उनीहरुका अनुसार बजारमा पाइने धेरैजसो अण्डा शाकाहारी भोजनभित्र पर्छन् ।
कोरियामा १०४ वर्षीया कोरोना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज
लुम्बिनीमा ध्यान केन्द्र सञ्चालनमा आउने